SOMALIA iyo Sudan oo ku muransan muuqaalka gabar dhowaan la kufsaday - Caasimada Online
Home Warar SOMALIA iyo Sudan oo ku muransan muuqaalka gabar dhowaan la kufsaday
SOMALIA iyo Sudan oo ku muransan muuqaalka gabar dhowaan la kufsaday
Khartoum (Caasimadda Online) – Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay baraha Bulshaday qabsaday muuqaal naxdin leh ayaa waxaa arrintaas siyaabo kala duwan uga hadlay dowladaha Suudaan iyo Soomaaliya.
Maxamed Maxamuud Fiidow oo ah U-qeybsanaha Warbaahinta ee Safaaradda Soomaaliya ee magaalladda Khartoum oo wareysi siiyey Wargeyska Al-tayyar ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in muuqaalkaas lagu sameeyey dalka Soomaaliya gaar ahaan Caasimadda Muqdisho.
Fiidow ayaa sheegay inaysan Soomaaliya wax xiriir ah la laheyn Muuqaalkaas waxuushnimada ah ee lagu faafiyey baraha Muqdisho kaasoo ahaaa kufsi loo geystay Gabar.
Muuqaalkaas marka lagu baahinayey Baraha Bulshada ayaa waxaa la sheegay inay arrintaas ka dambeeyeen dad kasoo jeedo dalka Suudaan, sidoo kalana waxaa la sheegay inuu falkaas ka dhacay dalka Suudaan dhexdiisa balse arrintaas dowladda waa ay beenisay.
Suudaan ayaa tilmaamtay in muuqaalkas lagu sameeyey dalka Soomaaliya isla markaasna aysan Suudaan lug ku laheyn.
Labadii Maalin ee lasoo dhaafay dhacdadaan ayaa si weyn looga hadal hayey warbaahinta dalka Suudaan welina Wasaaradda Arrimaha Gudah si rasmi ah ugama hadlin.